Ekonomi Dhaqaalaha - Ängelholms kommun
Du är här: Startsida / Other languages / Ku soo dhawoow degmada Ängelholm / Ekonomi Dhaqaalaha
Ma waxaad deggan tahay degmada Ängelholm oo ma awoodid inaad is masruufto?
Markaas waxaad xaq u leedahay in lagu siiyo kaalmo dhaqaale oo masruuf ah oo lagu cabbirayo baahidaada. Haddiise aad magangelyadoon tahay ama aad deggan tahay guryaha Hay’adda Socdaalka, markaas xaq uma lihid kaalmo dhaqaale.
In la codsado kaalmo masruuf waxaa la socda xuquuq iyo waajibaad. Inta aadan codsan kaalmo masruuf waa inaad marka hore ku dadaashaa sidii aad ula soo bixi lahayd masruufkaaga. Tusaale ahaan waxaa ka mid noqon kara inaad si firfircoon shaqo u raadineyso ama inaad marka hore isticmaasho hantidaada sida inaad iibiso baabbur haddaad leedahay. Xaq uma yeelaneyso kaalmo masruuf haddii aadan dadaal u gelin sidii aad masruufkaaga ula soo bixi lahayd. Waa inaad ka qoran tahay Xafiiska shaqada oo aad raacdaa qorshaha halkaas lagaaga dejiyo. Warbixin dheeraad ah, kala xiriir xafiiska adeegga dadweynaha ee degmada.
Lacagta barnaamijka meeleynta
Marka aad hesho sharciga degganaanshaha waxaad xaq u yeelan kartaa lacagta barnaamijka meeleynta. Haddaba si aad u hesho lacag dhammaystiran waa inaad ka
qaybqaadataa dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ka mid yihiin SFI, barashada bulshada iyo goob tababar shaqo.
Lacagta barnaamijka meeleyntu waxay ku saleysan tahay in aadan ka maqnaan dhaqdhaqaaqyada laguu qorsheeyey. Haddii aad xanuunsato ama ilmo kaa xanuunsado, waa in aad taas u sheegtaa cidda qabanqaabisa dhaqdhaqaaqyada aad ka qaybqaadato.
Haddii aad sabab la’aan iska maqnaato, waxaa lagaa goynayaa lacagta maalmaha aad ka maqnayd dhaqdhaqaaqyada laguu diray. Xaq ayaad u leedahay inaad guriga la joogto ilmo xanuunsan, taasina wax kama beddeleyso lacagta aad qaadato, laakiin waa inaad marka hore sii sheegtaa. Lacagta barnaamijka meeleynta waxaa marka ugu horreysa loogu talagalay in lagu bixiyo kirada biilasha kale iyo weliba cuntada bishaas oo dhan. Maamulka degmadu kaama caawinayo in uu kaa bixiyo biilashaada haddii aad lacagta u isticmaasho waxyaalo kale oo aan loogu talagelin.
Marka aad hesho guri cusub, waxaad lacag amaah ah weyddiisan karta Hay’adda kaalmada ardayda (CSN) si aad ugu iibsato alaabta guriga haddii waqtigii aad degmada soo degtay ay ka soo wareegtey in ka yar laba sano. Amaahdaas oo dulsaar la socdo waxaa la bilaabayaa bixinteeda marka ay laba sano ka wareegto markii la qaatay.